I-SEGA Heroes ikulethela uSonic kunye nabahlobo bakhe kumdlalo XNUMX umdlalo | I-Androidsis
I-SEGA Heroes yintsha yale nkampani idumileyo kwaye iyenzileyo isuka kwi-0 ukulandela ekuvukeni kweCandy Crush Saga. Ubuncinci bayisebenzisile kancinci kwaye isibeka phambi kwe-RPG apho siza kudibanisa uthotho lwamatye anqabileyo ukusebenzisa ubuchule begorha ngalinye leqela lethu.
Enye yezona mpumelelo zakhe zibalaseleyo ukuqokelela Sonic, imisila kunye neentlobo ezintle Abalinganiswa abavela kuthotho olukhulu lwemidlalo enje ngo-Sonic, igolide yegolide, izitalato zomsindo kunye nokunye. Iphazili ye-RPG engekapapashwa kwiVenkile yeGoogle Play, nangona ungayenza nge-APK ekupheleni kwesi sithuba.
1 Umdlalo we-SEGA owenziwe kwasekuqaleni
2 Iphazili ye-tic-tac-toe enesuntswana le-RPG
3 Kwaye okuninzi kwii-SEGA Heroes
Umdlalo we-SEGA owenziwe kwasekuqaleni
Ngaphandle kokuba ne-Sonic kunye nezinye ezininzi, eyona nto intle kukuba i-SEGA igqibile ukumisela umdlalo wezixhobo eziphathwayo yenziwe nge-0. Into ekufuneka uyikhumbule, njengoko ikhuphe nje amazibuko amabi eenqaku zakudala zeArcade. Phakathi kwazo kukho Izitalato zokugqibela zomsindo 2 leyo, nangona ingekubi kwaphela, ibinokusetyenziswa ngenye indlela.
I-SEGA Heroes isikhumbuza enye into yokuba ubeka isithethi kwimathematika kwaye yinto encinci ngakumbi kunale. Nangona unazo zonke ezo ntlobo zeentsomi ze-SEGA kungaphezulu kokubaluleka okongeziweyo ukonwabela umdlalo osekwe kuwo Yonke into engu-KING eneCandy Crush Saga yayo; kutshanje ndikhuphe enye kunye nePipi Crush Abahlobo Saga.
SEGA Amaqhawe asekwe kubuchwephesha be dibanisa amatye anqabileyo ahlukeneyo I laga yeCandy Crush Saga. Ekuphela kwento yokuba ngalo lonke ixesha sisazi ukudibanisa enye, elinye lamagorha ethu liya kusebenzisa izixhobo zawo ukuhlasela iqela leentshaba eziya kuba phambi kwethu. Kuxhomekeke kumbala wegem ebesiyisebenzisile ukudibanisa, siya kusebenzisa elinye okanye elinye iqhawe, nangona ngaxa lithile ziya kusetyenziswa zonke ngaxeshanye.
Iphazili ye-tic-tac-toe enesuntswana le-RPG
Ukuba sisebenzisa inkwenkwezi kolu dityaniso lwamatye ahlukeneyo, sinokubetha ngakumbi. Ingathi izakuhamba ukugcwalisa indawo yokubetha ekhethekileyo ukuba onke amaqhawe eqela lethu analo. Cofa kwiqhosha elihambelanayo, kwaye ukubetha okukhethekileyo kuya kusungulwa.
Sikwanokukhetha ukhetho lotshaba oluza kufumana iimpembelelo, ukuze sikwazi thabatha ezinye zeentshaba zamandla amakhulu Uhlaselo. Kwaye akukho nto incinci yokuthetha ngomatshini obalulekileyo, kuba isekwe ekwazini ukukhawulezisa ngokukhawuleza ezo zinto zibalulekileyo ukuze uqhubeke nokukhetha, kodwa ke, zonke ezo ntshaba esiza kuzifumana kwi-SEGA Heroes.
Umdlalo apho sinokulinganisa khona, njengaye vula amaqabane amatsha umdlalo esiza kuwudibanisa kwiqela lethu. Inye inesakhono sayo kwaye sinokubaphucula ngamanqaku ukuze somelele ngakumbi kwaye somelele.
Kwaye okuninzi kwii-SEGA Heroes
I-SEGA Heroes inokwenzeka yenza umbutho kwaye umjoyine adlale nabahlobo bakho okanye osebenza nabo. Nangona olona lonwabo kukuvula bonke abalinganiswa be-SEGA ukuze siwazi amandla abo okwenyani. Kwaye inyani kukuba zininzi kakhulu, ke sinethuba elide lokuphila ukuze sonwabe kumdlalo inkampani yaseKorea ebizamile ukuyenza kwasekuqaleni.
Ukuthobela kwezobuchwephesha, nangona kunjalo ngaphandle komdlandla omninzi. Akukho nto igqame ngaphezu kwendlela eyoneleyo, nangona izakhono ziya kuba lelona xesha lokungakhathali kuthotho lweziphumo ezenziwa kakuhle. Umdlalo wasimahla onokuzama kuwo i-APK ukuba awufuni kulinda.
I-SEGA Heroes iza kwi-Android ngazo zonke iinjongo yile nkampani ukuze ukonwabele ukudibanisa iigugu kunye nokusebenzisa izakhono zeqela lakho ukuze uzisuse zonke ezo ntshaba.
Ukukhuphela: SEGA Amaqhawe APK
Ukuzonwabisa kunye nokudlala
Yiba Sonic kunye nabahlobo
SEGA Heroes: RPG kunye neMatch-3 Imidlalo nge-Sonic
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » [APK] Ngoku unokukhuphela ii-SEGA Heroes ze-Android kunye ne-Sonic kunye nezinye ezininzi